Ii-FAQs-Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
A: Singabavelisi bazo zonke iimveliso ezidweliswe apha.
Umbuzo: Ngaba sinoku-odola ii-amino acids ezingadweliswanga kumnatha?
A: EWE, Sinikezela ngenkonzo yokudibanisa abathengi ngokweemfuno zakho.
A: Ixesha lokuhambisa ngokuqhelekileyo yi-7 ~ 15 iintsuku xa ufumene umyalelo osemthethweni.
Umbuzo: Ngaba uyabonelela ngeesampuli?Isimahla okanye yongeziweyo ?
A: Sinikezela ngeesampuli simahla.
Umbuzo: Uwulawula njani umgangatho?
A: Ibhetshi nganye yeempahla kufuneka ivavanywe kwaye ifumane imvume yokukhululwa yi-QA, kwaye sinenkqubo yokujonga i-QC ukujonga umgangatho.
Q: Ithini ipakethe yakho?
A: I-pakage yethu eqhelekileyo yi-25kg/barrel, ngaphakathi kukho iileya ezimbini ze-trasparent PE Bags.
Umbuzo: Ndingazi njani imeko yokuthunyelwa emva kwentlawulo?
A: Iinkcukacha zokuthumela ziquka ukupakisha, ukulandelela inombolo.kunye nokulayisha iifoto, amaxwebhu okuthumela aya kuhlaziywa nge-E-mail.
L-Leucine, Pharmaceutical Chemical, I-L-Glutamine Powder, I-Acetyl-L-Leucine, I-Dl-Pyroglutamic Acid, 537-55-3,